कमसल निर्माणमा खबरदारी- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामतलाई कमसल सामग्री प्रयोग गरेर नाला निर्माण भइरहेको बारेमा सोध्दा तत्काल निर्माण स्थल पुगेका थिए । अध्यक्ष कामत र उपाध्यक्ष मञ्जिताकुमारी सरदार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीलगायतका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए । अध्यक्ष कामतले नाला निर्माणमा गुणस्तरहिन काम भइरहेको बारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्की, वडाध्यक्ष पाण्डे र सब इन्जिनियर कर्णलाई सोध्दा तीनैजना मौन देखिए । कामतले तत्काल कमसल इँटा प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको नाला भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न निर्देशन दिए । ‘नाला निर्माणमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर गुणस्तरहीन काम गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘छानबिन गरी अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:५८
डा. श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा आएकै बेला सरासर उपचार गरेको भए ती व्यक्तिको उपचारमा बढीमा दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । मेडिकल अंकोलोजी विभागमा सन् २०१८ मा ओपीडी (बहिरंग) मा ३८ हजार २९३ बिरामी आएका थिए । त्यसमध्ये क्यान्सर नै प्रमाणित भएर उपचारका लागि अन्तरंग विभागमा आठ हजार ५९७ जना बिरामी आएका थिए । ‘उपचार पूरा नगर्ने बिरामी धेरै हुन्छन्,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनीहरू उपचार गर्न भन्दै गलत ठाउँमा पनि जाँदा रहेछन् ।’ क्यान्सर समयमा पत्ता लागेर सुरुमै उचित उपचार गरे निको हुने रोग हो । अहिले प्रायः बिरामी अन्तिम अवस्थामा उपचारका लागि क्यान्सर अस्पताल आउँछन् । ‘तर यो भाइको केस हेर्दा त मान्छेहरू सुरुमै अस्पताल आए पनि बहकिएर उपचार गर्न गलत ठाउँमा फस्ने गरेको देखियो नि । यस्तो समस्या कति होला हामीले ख्याल राख्न सकेका छैनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्‍यो ।’